Nke a na iwu nzuzo ("Policy") na-akọwa otú weebụsaịtị ọrụ ("Weebụsaịtị ọrụ", "Anyị", "Anyị" ma ọ bụ "anyị") nakọtara, echebe ma na-eji chọpụta mmadụ ("Ozi nkeonwe") ị ("User", "Gị" ma ọ bụ "gị") may provide on the https://bestappsformobiles.com website and any of its products or services (ịgụnye, "Weebụsaịtị" ma ọ bụ "Services"). Ọ na-akọwa nhọrọ dị gị banyere anyị na ojiji nke ozi gbasara gị na otú i nwere ike ịnweta ma melite ozi a. Nke a Policy adịghị emetụta omume nke ụlọ ọrụ ndị na anyị na-adịghị efe ma ọ bụ akara, ma ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu na anyị anaghị eji ma ọ bụ jikwaa.
Collection nke onye ozi
Anyị na-enweta na-echekwa ozi ọ bụla ị na-akpachara enye anyị mgbe ị jupụta ọ bụla online forms na weebụsaịtị. Ị nwere ike ikpebi agaghị enye anyị ụfọdụ ozi, ma mgbe ahụ, ị ​​gaghị enwe ike iji ohere nke ụfọdụ nke weebụsaịtị si atụmatụ. Ọrụ ndị na-ejighị ihe ọmụma bụ amanyere bụ iwu na-nnọọ ka kpọtụrụ anyị.
Collection nke na-abụghị onye ozi
Mgbe ị gara na weebụsaịtị sava anyị na-akpaghị aka idekọ ozi na ihe nchọgharị gị na-eziga. Nke a data pụrụ ịgụnye ozi dị ka ngwaọrụ gị adreesị IP, ụdị ihe nchọgharị na version, sistemụ ụdị na version, asụsụ mmasị ma ọ bụ na webpage ị na-eleta tupu ị bịara anyị weebụsaịtị, peeji nke anyị weebụsaịtị na ị gara, oge nọrọ na ndị na peeji nke, ozi ị chọọ na anyị weebụsaịtị, ohere ugboro na ụbọchị, na ndị ọzọ na ọnụ ọgụgụ.
Iji na nhazi nke anakọtara ozi
Ọ bụla nke ozi anyị na-anakọta si ị nwere ike eji mma anyị weebụsaịtị; na-agba ọsọ na-arụ ọrụ anyị weebụsaịtị na Services. Non-Personal Information anakọtara na-eji naanị mata nwere ikpe nke ọjọọ na iru mgbakọ na mwepụ ọmụma banyere weebụsaịtị ojiji. Nke a ndekọ ọnụ ọgụgụ ọmụma na-adịghị ma aggregated dị otú ahụ n'ụzọ ga-mata ọ bụla onye ọrụ nke usoro.
Anyị nwere ike hazie Personal Information metụtara gị ma ọ bụrụ na otu n'ime ndị na-esonụ na-emetụta: (i) I nyere nkwenye ha n'ihi na otu onye ma ọ bụ karịa kpọmkwem nzube. Rịba ama na n'okpuru ụfọdụ legislations anyị nwere ike kwere hazie ihe ọmụma ruo mgbe ị jụrụ ndị dị otú ahụ nhazi (site ịpụ), enweghị nwere ịdabere na nkwenye ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nke ndị na-esonụ iwu bases n'okpuru. Nke a, Otú ọ dị, na-adịghị emetụta, mgbe ọ bụla nhazi nke Personal Information bụ isiokwu European data nchedo iwu; (ii) Nyere Anyị ọmụma dị mkpa maka arụmọrụ nke nkwekọrịta gị na / ma ọ bụ n'ihi ihe ọ bụla tupu contractual ọrụ ya; (ii) Nhazi dị mkpa maka nnabata na a ibu ọrụ iwu nke ị na-isiokwu; (IV) Nhazi na-metụtara a ọrụ ahụ a rụrụ na ọha na eze nwere mmasị ma ọ bụ na ihe omumu nke ukara ikike nyekwara na anyị; (v) Nhazi dị mkpa maka nzube nke ziri ezi ọdịmma chua anyị ma ọ bụ site na a atọ. Otu ọ dịla, anyị ga-enwe obi ụtọ dokwuo anya kpọmkwem ndabere iwu kwadoro na-emetụta na nhazi, na karịsịa ma ndokwa nke Personal Data bụ a statutory ma ọ bụ contractual chọrọ, ma ọ bụ a chọrọ dị mkpa ịbanye a nkwekọrịta.
Ozi nyefe na nchekwa
Dabere na gị ebe, data na-enyefe nwere ike ịgụnye-ebufe na ịchekwa ozi gị na mba ndị ọzọ karịa gị onwe gị. Ị na-isiokwu na-amụ banyere ihe ndabere iwu kwadoro nke ozi-enyefe a obodo n'èzí European Union ma ọ bụ ka ọ bụla nzukọ zuru ụwa na-achịkwa ọha na eze iwu mba ma ọ bụ melite abụọ ma ọ bụ karịa mba, dị ka UN, na banyere nchebe e site anyị na-echebe gị ozi. Ọ bụrụ na ọ bụla dị otú nyefe-ewe ebe, i nwere ike ịchọpụta ihe site n'inyocha mkpa ngalaba nke akwụkwọ a ma ọ bụ jụọ ase na anyị na-eji ozi nyere na kọntaktị ngalaba.
The ikike nke ọrụ
Ị nwere ike inwe ụfọdụ ikike banyere gị ozi Hazie site anyị. Ọ kachasị, ị nwere ikike ime ndị na-esonụ: (i) ị nwere ikike ịdọrọ nkwenye ebe ị na mbụ nyere nkwenye gị na nhazi nke gị ozi; (ii) ị nwere ikike ikwu na nhazi nke ozi gị ma ọ bụrụ na nhazi a rụrụ na a ndabere iwu kwadoro ọzọ karịa nkwenye; (III) ị nwere ikike ịmụta ma ọ bụrụ na ozi a na-esichara site na anyị, enweta ngosi banyere akụkụ ụfọdụ nke nhazi na inweta a oyiri nke ozi n'ịnwụ nhazi; (IV) ị nwere ikike iji nyochaa izi ezi nke ozi gị na-arịọ maka ya ka-emelitere ma ọ bụ gbazie; (v) ị nwere ikike, n'ọnọdụ ụfọdụ, igbochi nhazi nke ozi gị, nke ikpe, anyị ga-adịghị hazie gị ozi maka ihe ọ bụla nzube ndị ọzọ karịa akpakọba ya; (anyị) ị nwere ikike, n'ọnọdụ ụfọdụ, iji nweta erasure gị Personal Information si anyị; (VII) na ị nwere ikike na-enweta gị ozi na a ahaziri, ọtụtụ ndị na-eji na igwe ogugu format na, ma ọ bụrụ na e nyochawa apụtakarị, ka ya-ebute site ná ọzọ njikwa enweghị ihe ọ bụla na-egbochi. Ndokwa a na-na ọdabara bụrụhaala na ozi gị na-esichara site akpaghị aka n'aka nakwa na nhazi dabeere nkwenye gị, on a nkwekọrịta nke ị bụ akụkụ nke ma ọ bụ na tupu contractual ọrụ ya.
The ikike jụrụ nhazi
Ebe Personal Information esichara maka a ọha mmasị, na ihe omumu nke ihe ukara ikike nyekwara na anyị ma ọ bụ maka nzube nke ziri ezi ọdịmma chua site anyị, i nwere ike ikwe ka ndị dị otú ahụ nhazi site n'inye a n'ala metụtara gị akpan akpan ọnọdụ ziri ezi na-ajụghị. Ị ga-amarakwa na, Otú ọ dị, ga gị Personal Information-esichara maka kpọmkwem ahịa nzube, i nwere ike ikwe ka na nhazi n'oge ọ bụla na-enweghị inye ọ bụla ziri ezi. Iji mụta, ma anyị na-nhazi Personal Information maka kpọmkwem ahịa nzube, i nwere ike na-ezo aka mkpa ngalaba nke akwụkwọ a.
Olee na-egosipụta ikike ndị a
Ọ bụla na-arịọ na-egosipụta User ikike ike-eduzi ndị nwe site na kọntaktị nkọwa nyere na akwụkwọ a. Ndị a na-arịọ ike-gosipụtara n'efu na a ga-agwa okwu na-nwe dị ka n'oge dị ka o kwere na mgbe n'ime otu ọnwa.
Nzuzo nke ụmụ
Anyị na-adịghị akpachara anakọta ọ bụla Personal Information site n'aka ụmụaka na-erubeghị afọ 13. Ọ bụrụ na ị bụ n'okpuru afọ 13, biko, unu n'okpuru ọ bụla Personal Information site na anyị weebụsaịtị ma ọ bụ Service. Anyị na-agba nne na nna na iwu ẹkekpemede nyochaa ụmụ ha Internet ojiji na-enyere manye a Policy site n'ịkụziri ụmụ ha mgbe inye Personal Information site na anyị weebụsaịtị ma ọ bụ Service enweghị ha ikike. Ọ bụrụ na ị nwere ihe na kwere na a nwa n'okpuru afọ 13 nyere Personal Information ka anyị site na anyị weebụsaịtị ma ọ bụ Service, biko kpọtụrụ anyị.
Anyị nwere ike na-egosipụta online mgbasa ozi na anyị nwere ike ịkekọrịta nchịkọta na-abụghị ịmata ihe ọmụma banyere ndị ahịa anyị na anyị na-anakọta site ndebanye usoro ma ọ bụ site na online nnyocha ndị e mere na n'ọkwá na ụfọdụ-akpọsa ngwá ahịa. Anyị na-adịghị ekere òkè chọpụta mmadụ banyere mmadụ ndị na ahịa na-akpọsa ngwá ahịa. N'ọnọdụ ụfọdụ, anyị nwere ike iji nke a nchịkọta na-abụghị ịmata ọmụma napụta ahaziri mgbasa ozi ahụ bu n'obi na-ege ntị.
Anyị weebụsaịtị dere njikọ ọzọ weebụsaịtị na-adịghị ekesịpde ma ọ bụ na-achịkwa anyị. Biko mara na anyị abụghị ndị na-ahụ maka omume nzuzo nke ndị dị otú ahụ ndị ọzọ weebụsaịtị ma ọ bụ atọ-ọzọ. Anyị na-agba gị na-maara mgbe ị na-ahapụ anyị weebụsaịtị na-agụ na nkwupụta nzuzo nke ọ bụla website nke ahụ nwere ike na-anakọta Personal Information.
Anyị nọrọ ná nchebe ọmụma ị nyere na kọmputa na sava na a achịkwa, iru ala, echebe site n'enweghị ikike ohere, were, ma ọ bụ ngosi. Anyị ịnọgide na-enwe ezi uche ndutịm, technical, na n'ụzọ anụ ahụ echebe ná mgbalị iji chebe megide n'enweghị ikike ohere, were, mgbanwe, na ngosi nke Personal Information ya akara na mkpọrọ. Otú ọ dị, dịghị data nnyefe n'elu Ịntanetị ma ọ bụ ikuku na netwọk nwere ike na-ekwe nkwa. Ya mere, mgbe anyị na-agbalịsi ike ichebe gị Personal Information, ị na-ekweta na (i) e nwere nche na nzuzo na-agaghị emeli nke Internet nke bụ ndị karịrị anyị; (ii) nche, ike n'ezi, na nzuzo nke ọ bụla na ozi niile na data gbanwere n'etiti gị na anyị weebụsaịtị na-apụghị na-ekwe nkwa; na (III) ọ bụla dị otú ahụ ozi na data a pụrụ ile anya ma ọ bụ tampered na n'ụzọ na-aga site a-atọ ndị ọzọ, n'agbanyeghị mgbalị kasị mma.
Na omume anyị maara na nche nke weebụsaịtị e mie ma ọ bụ ọrụ Personal Information e mara na-agbasaghị na-atọ ndị ọzọ dị ka a n'ihi nke mpụga ọrụ, na nsonye, ma na ọnweghị oke, nche ọgụ ma ọ bụ igwu wayo, Anyị na-doputa ikike iri ezi uche kwesịrị ekwesị jikoro, na nsonye, ma na ọnweghị oke, nchoputa na akuko, nakwa dị ka ngosi ka na imekọ ihe ọnụ na ndị mmanye iwu na ndị ọchịchị. Na ihe omume nke a data iro, anyị ga-eme ka ezi uche mgbalị iji gwa otụk mmadụ ma ọ bụrụ na anyị kweere na e nwere a uche n'ihe ize ndụ nke nsogbu ka onye ọrụ dị ka a n'ihi nke iro ma ọ bụ ma ọ bụrụ na-achọpụta bụ ma achọrọ site na iwu. Mgbe anyị na-eme, anyị ga-biputere a mara na weebụsaịtị.
Anyị na-doputa nri iji gbanwee nke a na iwu nzuzo metụtara ndị weebụsaịtị ma ọ bụ Services n'oge ọ bụla, irè n'elu ikenye nke emelitere mbipute a Policy na weebụsaịtị. Mgbe anyị na anyị ga-agụgharị emelitere ụbọchị na ala nke a na peeji nke. Wee ojiji nke weebụsaịtị mgbe ọ bụla mgbanwe ndị dị otú ga-emekwa gị nkwenye mgbanwe dị otú ahụ.
Ịnakwere a iwu
Ị na-ekweta na ị na-agụ nke a Policy na-ekweta na ya niile usoro na ọnọdụ. Site na iji weebụsaịtị ma ọ bụ ya Services ị na-ekweta na-agbụ a Policy. Ọ bụrụ na ị na-ekweta na-erube isi okwu a Policy, ị na-adịghị ikike iji ma ọ bụ nweta weebụsaịtị na ya Services.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla banyere nke a Policy, Biko Kpọtụrụ anyị. [email protected]
Nke a Document e emelitere ikpeazụ on May 24, 2018
Download Jetpack Joyride (MOD, akparaghị ókè ego) 1.10.7 …
Patapon 3 Gam akporo PSP ISO Game [USA] …
PokeMesh ngwa Download – Best Apps maka…
Lineage 2: Mgbanwe .APK Download – Best…